ड्रिलिंग मड्स र प्याकर फ्लुइडहरूको लागि अल्ट्रासोनिक मिक्सर - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
ड्रिलिंग तरल (ड्रिलिंग मिड) ड्रिलिंग को तेल कुओं, प्राकृतिक ग्याँस कुओं, अन्वेषक कुओं (wildcat कुओं) वा पानी को कुओं को सहायता को लागि प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू पानी आधारित मिड (डब्ल्यूबीएम, जलीय), तेल-आधारित माछा (ओबीएम, गैर-अक्टोक) वा सिंथेटिक-आधारित मिड (एसबीएम) मिश्रण, फैलाउने, पाईने र डिसिङ गर्ने प्रभावकारी प्रविधि हुन्।
ड्रिलिंग मिडको गठन र लगातार गुण आज ड्रिलिंग अपरेसनमा एक प्रमुख कारक हो। मिड रचना र विशेषता राम्रो तरिकाले बोस स्थिरता, स्नेहन, कूलिंग र प्रवेश को ड्रिलिंग दर मा प्रभाव पार्छ। ड्रिलिङ तरल पदार्थसँग पनि सानो समस्याहरूले सम्पूर्ण ड्रिलिंग अपरेसन रोक्न सक्छ। अत्यधिक घना धेरै घनी वा धेरै ड्रिलिंग मिडको परिणाम हुन सक्छ परिसंचरण को एक महत्वपूर्ण हानि हुन सक्छ।
WBMs सामान्यतः ताजा पानी, समुद्री पानी, वा (संतृप्त वा ढाँचा) काल र प्राकृतिक मिट्टी र पोलिमरको बनाइन्छ। ओबीएम र एसबीएम निरन्तर-बाह्य चरणको रूपमा तेल बेस (डीजल, खनिज तेल) वा सिंथेटिक आधार (ओल्फिन र पैराफिन्स) इन्भर्ट-इम्युसन प्रणाली हुन्, र फैलाउने (आन्तरिक) चरणको रूपमा ब्रिन। पातलो पानीको प्रवाहको अतिरिक्त सामना गर्न पायस पर्याप्त हुन्छ। तेलमा पानी भन्दा कम सामान्य (तेल पायसी माछाहरू उल्टाउनुहोस्) तेलमा तेल (तेल पायस मिड)। अल्ट्रासोनिक इमुलेशन दुवै पायलो प्रकारका लागि कार्य गर्दछ र आन्तरिक ब्रिन वा पानीको चरणको राम्रो विद्युत स्थिरता प्राप्त गर्दछ।
हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू धेरै प्रभावकारी र उत्पादन प्रयोगका लागि तीव्र cavitational कतरनी मिक्सरहरू हुन्। सामान्यतया, अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरूले उच्च throughput सिंगल पास प्रोसेसिंग वा पुनःप्राप्त ब्याच प्रोसेसिंगको लागि इनलाइन प्रयोग गरिन्छ।
तपाईं अल्ट्रासोनिक मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
उच्च एकाग्रता मास्टरब्याच तयार गर्नुहोस्
तयार ड्रिलिंग तरल पदार्थ वा प्याकर तरल पदार्थ प्रयोग गर्नुहोस्
डिग्री ड्रिलिंग माड्स
राम्रो ड्रिलिंग माछा विकास र बनाउनुहोस्
ड्रिलिंग मिड Additives को विनिर्माण
रसायन र Additives को विनिर्माण, जस्तै उच्च प्रसंस्करण क्षमता तरल बहुलक स्लायर्स फायदाहरु र अल्ट्रासोनिक कतरनी को मिश्रण को लचीलापन। अल्ट्रासोनिक मिक्सिंग एसिसेसिफायरहरु, पिक्चर कमर वा बहुलक ऐनाटाइभ्स जस्तै पूर्ण क्षमता को पूर्ण क्षमता लाई हटाउँदछ। अल्ट्रासोनिक cavitation हाइड्रेट पाउडर छिटो र पुरा तरिकाले मड को मिश्रण को समयमा।
तरल / तरल इम्युसनको मिश्रणको लागि, Hielscher MultiPhaseCavitator तीव्र cavitational कतरनी क्षेत्रमा दुई चरणहरूको मिश्रण इनलाइन सुधार। MultiPhaseCavitator को बारे मा अधिक जानकारी को लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस!
अल्ट्रासोनिक मिक्सले सीमा तह वा तरकारीमा कणमा मास-ट्रांसफर सुधार गर्दछ। यसले ब्राइनहरू तयार पार्न आवश्यक समय घटाउँदछ वा संतृप्त ब्राइनहरू, उदाहरणका लागि क्याल्सियम क्लोराइड ब्रिन, क्याल्सियम ब्रोइड ब्रिन, जस्ता ब्रोमाइड ब्रिन, वा पोटेशियम र सिजियम ढाँचा ब्रिन।
मास्टर ब्याच क्ले वा एडिटिभ्स
अन्तिम ड्रिलिंग मिड ढाँचामा थप गर्नु अघि तपाईले उच्च एकाग्रता वा उच्च घनत्व मास्टर ब्याचहरू (उदाहरणका लागि क्याल्सियम कार्बननेट (चक), डिब्बोकुलर वा स्क्यानर) बनाउन अल्ट्रासोनिक क्यानर मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
ड्रिलिंग र प्याकर फ्लुइड ड्रिलिंग
ड्रिलिंग मिड प्रदर्शन, जस्तै कि शान स्थिरता, भिषास, कूलिंग वा स्नेहन धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुणस्तरमा गुणस्तर र स्थिरता। अल्ट्रासोनिक कतरनी मिश्रण समान वर्णाकार कण आकार वितरणको निर्माणमा धेरै प्रभावकारी छ र यसैले राम्रो फैलावट र पायस स्थिरता। यसले स्टेसन अलगाव रोक्छ वा स्टोरेज, ट्राभल वा भित्री समयमा बसाल्दछ।
आज ड्रिलिंग मिड विनिर्देशहरू प्रायः परिवर्तन गर्दछ। Hielscher अल्ट्रासोनिक रिएक्टर तरल गठन परिवर्तन ड्रिलिंग को लागि धेरै अनुकूलन हुन्छन्। अल्ट्रासोनिक इनलाइन-एकल-पास मिश्रणसँग पारंपरिक ब्याचबाट परिवर्तन गरेर, तपाईं एकै अल्ट्रासोनिक मिसिनमा विभिन्न ड्रिलिङ मिड प्रकारहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले इन्वेंट्री र शेल्फ भण्डारण समय घटाउन मद्दत गर्दछ।
परम्परागत माकहरू (जस्तै बेन्टोनाइट) को फैलाव र तरल पदार्थ मा विशेष रूप देखि उपचार गरिएको अर्गोफिलिक माटो अत्यधिक चिपचिपा, thixotropic या कतरनी thinning gels र स्वाद प्रस्तुत गर्दछ। जब उच्च अल्ट्रासोनिक कतरनी को सामने उजागर भएको छ, भिस्कोसीता मुक्त बहने वाला राज्य को बूँद्छ। यसले फैलाउने र हस्तलिपिलाई सुविधा दिन्छ। यस कारणको लागि, थिक्सोट्रोपिक र कलर-पिसाबको स्वादको मिश्रणको लागि sonication धेरै प्रभावकारी छ। Sonication बेंरोनाइट कणहरु / प्लेटलेटहरु र बेहतर हिज्जे विशेषताओं को एक बेहतर फैलाव मा परिणाम। बेन्टोनाइट को अल्ट्रासोनिक फैलाव को बारे मा अधिक जानकारी को लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस!
बेन्टोनाइट को अल्ट्रासोनिक फैलाव (अल्ट्रासोनिक मिक्सर UIP2000hdT संग प्रदर्शन गरियो)
राइकोलोजी परिमार्जक, मोटाईर र स्थिरता (उदाहरणार्थ गम्स, ग्ल्याककोल, कार्बोक्सिथ्याइथाइलसेलुलोज, पोलिभियोनिक सेल्युलोज (पीएसी) वा स्टार्च) अधिकतम प्रभावकारिताको लागि राम्रो वितरण आवश्यक छ। अधिक जानकारी को लागि गन्थन गम र ग्वार गम जस्तै अल्ट्रासोनिक फैलाव मा, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस!
भारकारी एजेन्टहरू, जस्तै बेरियम सल्फाइट (बाली) भण्डारण, ढुवानी वा ड्रिलिंगको समयमा मडबाट अलग हुँदैन। Stokes 'कानून अनुसार, साना कणहरु तलछी गति या बिल्कुल नहीं। अल्ट्रासोनिक फैलावटले ठूलो एग्लूमेमेमेन्ट्सबाट बचाउँछ, जुन फैलावट अस्थिरता हुन सक्छ। प्रणाली घटाउँदा ठोसको लागि यसको सहिष्णुता बढाउन सक्छ, यसले 20 पाउन्ड / गैलन (यूएस) वा 2.4 जी / सेमिटरसम्मको वजन बढाउन सम्भव बनाउँछ।3।
ड्रिलिंग मुड को डिग्री
ड्रिलिंग माड्स को तैयारी गर्दा, Bentonite माटो पाउडर र अन्य additive पाउडर ड्रिलिंग माछा मा धेरै हावा परिचय। यो ग्याँस तरल प्रणाली भित्र लिपिन्छ र हुनसक्छ र पायसीफायर वा स्थिरता प्रदर्शनमा हानिकारक हुन सक्छ। अल्ट्रासोनिकेशनको समयमा दोहोर्याइएको कम्प्रेजन (उच्च-दबाव चक्र) र दुर्लभ (कम-चक्र चक्र) ले ग्यासहरू माइग्रेट गर्न र सानो माइक्रोबुलहरू बनाउँदछ। अल्ट्रासोनिक लहरहरूले ग्यास माइक्रोबुलल्सलाई कोलोसिसमा बलियो बनाउँछ। अल्ट्रासोनिक उच्च गोलाकार कतरनी कतरनी thinning र thixotropic ड्रिलिंग तरल पदार्थ को चिपचिपापन को कम गर्दछ। यसले एयर बुलबुले तीव्र गति बढाउँछ। यसले डाउनस्टोड विभाजक ट्यांक वा वैक्यूम डेरासिंगमा राम्रो ग्याँस जुदाईको लागी पुर्याउँछ। Degassing माछा वजन बढ्छ, चिपचिपापन र अलगावका समस्याहरू कम गर्दछ। कम ग्याँस बुलबुले इम्युलेफायरहरू, स्थिरताहरू, सर्फ्याक्टेंटहरू वा डेलिभर गर्ने एजेन्टहरूको प्रयोग घटाउँछन्। यसले प्रति बैरल खर्च गर्दछ। ग्यास सामग्रीमा कमीले एरोबिक माइक्रोबियल वृद्धिलाई पनि रोक्न सक्छ।
तरलहरूको Degassing Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूको एक शक्तिशाली अनुप्रयोग हो। भिडियोले हिलस्चर UP200S तेलको ह्रासको समयमा देखाउँदछ।
ड्रिलिङ मड निर्माणको विकास र अनुकूलन
नयाँ नियमले पर्यावरणलाई प्रभाव कम गर्न को लागी केहि रसायनहरु को माडहरुमा प्रयोग गर्न को लागी सीमित गर्दछ। यो नयाँ नियन्त्रिक ढाँचामा ढाँचाको अनुकूलन आवश्यकता पर्दछ। अल्ट्रासोनिकले तपाईंलाई ड्रिलिङ मड घटकको प्रदर्शनलाई अधिकतम गर्न मद्दत गर्न सक्छ, त्यसैले तपाई कम र कम लागतको सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हेलसिचले हाम्रो प्रयोगशालामा मड बनावट परीक्षण ड्रिल प्रदान गर्दछ। विभिन्न तापमान र बिना कतरनीमा केनेमेटिक भिषासिस माप सहित।
औद्योगिक उपयोग को लागि भारी ड्यूटी डिजाइन
हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरूले ठूला र घर्षण कण वा एग्ग्रोमेमेरेटहरूलाई सम्हाल्न सक्छन्। यसैले तपाईं एक agglomerated पंप योग्य स्लायरी वा ड्रिल घटक घटक संग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जब तरल अल्ट्रासोनिक समस्याहरुमा मिश्रण पाउडरहरू र कणहरू रोटर-स्ट्याटर मिक्सरहरू वा उच्च-दबाव होमगेनसरहरू भन्दा कम घर्षण पहिरन देखाउँछ। हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक परीक्षाहरु लाई ग्रेड5टाइटेनियम को बढावा दिए गए जंग प्रतिरोध को लागि बनाइन्छ, उदाहरण को लागि जब समुद्री जल को बदले WBMs मा समुद्री जल को उपयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरूसँग कुनै रोटरी मुहर वा बीयरिंग छैन। Hielscher अल्ट्रासोनिक मिक्सरहरू भारी-कर्तव्य प्रयोगको लागि औद्योगिक ग्रेड हो – ओशोर र अपतटीय (रिग)। सामान्यतया, अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू साना पदचिन्हका लागि ठाडो रूपमा उन्मुख हुन्छन्।
यदि तपाईं अल्ट्रासोनिक मिश्रणको बारेमा थप जानकारी अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तल फारम प्रयोग गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई एक अल्ट्रासोनिक प्रणाली प्रस्ताव गर्न खुसी हुनुहुनेछ।
तेल र ग्याँस उद्योगमा अल्ट्रासोनिक मिश्रणको उपयोग ड्रिलिंग माडभन्दा बाहिर फैलिएको छ।
प्रवाह र प्रक्रिया तरल पदार्थ को डिग्री
स्वाभर्सरहरू (जस्तै एच2एस स्कूभरहरू) वा सुरक्षात्मक रसायनहरूसँग मिल्दो, जस्तै स्केल र जंग रोकथाम
छिटो सिमेन्टिंगको लागि सीमेंट सेट समय घटाउनुहोस्
अल्ट्रासोनिक तैयारीको संतृप्त ब्रिन वा बनाइएको द्रव
ड्रिलिंग मिड्स मा जीवाणु गतिविधि को कम गर्नुहोस
डाउनस्ट्रीम तेल प्रसंस्करण, उदाहरणको वर्णन गर्नुहोस्
तेल र तलघर नमूना तयारी